U-Arturo - Uwela iDachshund noHound Maremmano Messina
Inja encane ethanda ukudla nokukhanya kwelanga.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-15)
Inja ngentokozo enkulu, Arturo isiphambano phakathi kwe dachsbracke dachshund futhi a Maremma hound. Umdlwane ongaphansi kwezinyanga eziyi-6, usevele azi ukuthi angaletha kanjani uthando oluningi emndenini wakhe Messina yakhiwa iValeria, iSmeralda nePasquale.
Nazi u-Arturo, uBassotto noSegugio: inja eqinile futhi ezimisele kakhulu
Ngemigqa emihle nenkulumo emnandi, Arturo kungukuthi impukane enemibala egqamile owazalelwa kuyo Messina ngonyaka ka-2019 dachsbracke dachshund futhi a Maremma hound futhi kungokwalabo izinja izinja ka ama-hound enemilenze emifushane. Kakhulu kune-a inja yezinja, U-Arturo usunomlingiswa ochazwe kahle.
IHound of Westphalia yafika eMessina
Imvelaphi Inja ka-Arturo zingamaJalimane futhi zivela emuva emakhulwini eminyaka adlule. The dachsbracke dachshund, empeleni, yinye uhlobo lwe-canine oludala, okungenzeka ukuthi itholakala esiphambanweni esiphakathi thwala izinja usayizi ophakathi ei dachshunds. Ifike emndenini kwajabulisa omncane, omncane inja encane u-Arturo ngokushesha waba yingxenye yomndeni, ekuhlaselweni yi- coda, ukusondelana kwe paw nezinduna eziningi.
Ukulamba okungapheli: inja u-Arturo iyisinongo
Sizimisele kakhulu futhi sihlanganisiwe, kuyathandeka lokhu hound inja crossbreed ukuthanda ukudla futhi wayechitha usuku lonke edla. Kepha hhayi kuphela. Uthanda ukuhamba amabanga amade nokuthatha indawo. Ngaphezu kwalokho, uyakuthanda ukuba maphakathi nokunakwa futhi ulele elangeni ukuze ujabulele imisebe yalo efudumele.
Imilenze ebukeka kahle futhi esheshayo: U-Arturo yisibungu esinomdlandla
Indlalifa efanelekile Dachshund I-Dachsbracke futhi we Maremmano hound, Arturo kungukuthi umoba nge ikhala elikhulu futhi ibonakala ngo-a ukukhonkotha okubonakalayo kakhulu. Agile, izimisele futhi imnandi, lokhu hound ugcwalisa izinsuku zomndeni wakhe ngenhliziyo emsulwa, injabulo nenjabulo.
Ikheli: State Road, 114
I-POSTAL CODE: 98131
Umakhala ekhukhwini: 380 8603768